Shuruucda Daraasaadka iyo Baarista Shilalka Dhacdooyinka iyo Dhacdooyinka | RayHaber
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraHirgelinta Xeerka Baadhista iyo Baadhista Shilalka Waddooyinka Tareenka iyo Dhacdooyinka
14 / 11 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
maareeyaan oo baaraan shilalka tareenka iyo dhacdooyinka
Shuruucda Baadhista iyo Baadhista Shilalka Dhacdooyinka iyo Dhacdooyinka Tareenka ayaa dhaqan galay ka dib markii lagu daabacay Jariidada rasmiga ah.
Laga soo bilaabo Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha:
XUQUUQDA SHAQADA IYO BAARITAANKA KHILAAFKA RAILWAY IYO KHARASHADA
ARTICLE 1 - (1) Ujeeddada Xeerkan ayaa ah: Ujeeddada koorsadan ayaa ah in la go'aamiyo habraacyada iyo mabaadii'da baaritaanka iyo baaritaanka shilalka tareenka iyo dhacdooyinka, ogeysiinta la socota iyo waajibaadka, mas'uuliyiinta iyo mas'uuliyadaha.
ARTICLE 2 - (1) Xeerkan;
a) Shilalka iyo shilalka ka dhaca khadadka ku xiran shabakada kaabayaasha tareenka ee qaranka,
t) Shabakada kaabayaasha tareenka ee dalka shisheeye; qorshee gaadiidka tareenka la shaqeeya tareenka tareenka Turkish, soo saaridda, dayactirka ama shilal ay ku lug gaadiidka tareenka ka diiwaan gashan dalka Turkiga iyo dhacdooyinka,
baaritaan iyo baaritaan.
ARTICLE 3 - (1) Xeerarkan waxaa loo diyaariyey iyada oo lagu saleynayo Qodobka 10 / A ee Wareegtada Madaxweynaha ee 7 lambarka 2018 ee lagu daabacay Rasmiga rasmiga ah ee ku taariikhaysan 30474 / 1 / 489.
ARTICLE 4 - (1) Xeerarkan;
a) Wasiirka: Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha,
b) Wasaaradda: Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha,
c) Qaybta Dayactirka: Hay'ada uu magacaabay milkiilaha gaariga mas'uul ka ah dayactirka dhammaan noocyada kala duwan ee gawaarida tareenka marka laga reebo gawaarida xamuulka oo ay ogolaatay Wasaaradda,
ç) Ururka mas'uulka ka ah dayactirka: Ururka u idman Wasaaradda u xilsaaran dayactirka baabuurta xamuulka,
d) Madaxweynaha: Madaxweynaha Xarunta Dib-u-eegista Amaanka Gaadiidka,
e) Madaxtooyadda: Xarunta Dib u eegista Amniga Gaadiidka,
f) Shil aad u xun: Shil sababa geerida ugu yaraan hal qof ama dhaawac culus ugu yaraan shan qof, ama dhaawaca guud ee uu sababay gawaarida, wadooyinka, tas-hiilaadka kale ama bay'ada, oo gaaraya 2 milyan.
g) Guddiga qiimeynta: Guddiga go'aamiya warbixinnada shilalka ama shilalka dhaca ee la baaray si loo kordhiyo amniga gaadiid,
infrastructure) Kaabayaasha Tareenka: Koronto, calaamad iyo xarumaha isgaarsiinta oo leh tareenka, dhulka, balaastikada, jiifka iyo tareenka, iyo dhammaan noocyada farshaxanka, tas-hiilaadka, saldhigyada iyo saldhigyada, saadka iyo xarumaha xamuulka iyo ballaarintooda iyo khadadka la xiriira, isbarbar dhig kuwani,
h) Kaabayaasha wadooyinka tareenka: Hay'adaha sharciga dadweynaha iyo shirkadaha loo idmaday inay ku shaqeeyaan kaabayaasha tareenka hab hab amaan ah ugana dhiga kuwa u shaqeeya wadayaasha tareenka.
vehicles) Gawaarida tareenka: Dhammaan noocyada gawaarida jiida iyo kuwa lagu jiido iyo tareennada oo ay ku jiraan dhismaha khadka, dayactirka, hagaajinta iyo xakamaynta gawaarida,
i) Hawlwadeenka tareenka tareenka: Hay'adaha sharciga dadweynaha iyo shirkadaha loo idmaday inay xamuulka xamuulka iyo / ama rakaabka ku qaadaan shabakadda kaabayaasha tareenka,
j) Nidaamka maareynta amniga: Qaab dhismeedka hay'adeed ee xaqiijiya howlgalka aaminka ah ee wadayaasha kaabayaasha tareenka iyo wadayaasha tareenka tareenka, si nidaamsan u garto tallaabooyinka lagu yareynayo halista iyo shilalka iyo yareynta khataraha iyo in la hubiyo in qawaaniinta, tilmaamaha iyo habraacyada la raaci karo oo si joogto ah dib loogufiirin karo,
k) Kooxda: Koox khubaro ah oo loo magacaabay baaritaanka iyo baaritaanka shil kasta oo dhacay,
l) Madaxweynaha Kooxda: Khabiir ku qalabeysan waajibaadka isuduwidda iyo awoodaha inta lagu gudajiro baaritaanka iyo baaritaanka shil kasta ama shil,
m) Baadhitaan: Habka ay ka mid yihiin waxqabadka ururinta iyo falanqaynta macluumaadka, aqoonsashada sababaha suuragalka ah iyo bixinta talooyinka amniga ee lagama maarmaanka u ah si looga hortago shilalka iyo shilalka dhaca,
n) Isdhaafsiga: Hubinta dhaqdhaqaaqa aan kala go 'lahayn oo aamin ah ee gawaarida tareenka ee taraafikada caalamiga ah,
o) Shil: Shil aan loo baahnayn, lama-filaan ah, kedis ah oo silsilad ah oo lama-filaan ah ama dhacdooyin leh cawaaqib xumo sida burbur hantiyeed, dhimasho iyo dhaawac,
ö) Noocyada shilalka: isu uruurinta, kala gooshida, shilka goynta, dhaawac shaqsiyeed ee gaariga tareenka socda, dabka iyo shilalka kale,
p) Dhacdada: Aan la rabin, lama filaan, xaaladaha saameeya howlgalka iyo / ama amniga nidaamka tareenka oo dhaca meel ka baxsan qeexitaanka shilka,
r) Warbixinta horudhaca ah: Warbixin gaaban oo ku saleysan natiijooyinka bilowga ah ee shilka ama shilka, oo saldhig u noqon doona go'aanka in la sii wado baaritaanka,
s) Warbixinta: Warbixin la soo saaray si loo kordhiyo amniga gaadiidka sababta oo ah baaritaanka iyo baaritaanka shilka ama shilka,
ş) Shirkadda: Shirkadda ka diiwaangashan diiwaangelinta ganacsiga ee loo hayey si waafaqsan Xeerka Ganacsiga ee Turkiga ee No. 13 taariikhdeedu tahay 1 / 2011 / 6102,
t), tareenka qaranka shabakadaha kaabayaasha: xarumaha gobolka iyo degmadu ku yaalaan dalka reer Turkey iyo meelaha kale ee leh dekadaha, airfields, goobaha warshadaha abaabulan, saadka iyo xarumaha xamuulka, isku xidha shabakad kaabayaasha xadiidka dhafan ay leeyihiin dadweynaha ama shirkadda,
u) Maamulka Boliiska Qaranka: Agaasinka Guud ee Sharciga Tareenka,
ü) Khabiir: Qaadashada kormeerka nabadgelyada gaadiid socodka; Shaqaalaha Madaxtooyada iyo hawlwadeenada loo xilsaaray Wasaaradda ee xiriirka la leh, laxiriirta iyo hay'adaha la xiriira,
Ujeeddada Baadhitaanka Shilka iyo Shilka, Ogeysiiska Shilalka iyo Dhacdooyinka,
Go'aan Gaarista, Cadeeynta iyo Sirta Xogta
Ujeeddada shilka iyo baaritaanka shilka
ARTICLE 5 - (1) Ujeedada shilka tareenka iyo baaritaanka shilka sida hoos timaada Xeerkan; iyo in la soo jeediyo talooyin si ay gacan uga geystaan ​​horumarinta sharciga iyo dhaqamada loogu talagalay badbaadada nolosha, hantida iyo deegaanka ee jidadka tareenka iyadoo laga hortagayo shilalka iyo shilalka suurta galka ah ee dhici kara iyo in laga hortago shilalka la midka ah iyo shilalka mustaqbalka.
(2) Shilka tareenka iyo baaritaannada dhacdada ee lagu sameeyo baaxadda Xeerkan ma aha baaritaanno ama baaritaanno maamul oo ujeeddadiisu ma aha in lagu garto dambiilaha iyo dambiilaha ama la wadaago mas'uuliyadda.
Waajibaadka ka warbixinta shilalka iyo shilalka
ARTICLE 6 - (1) Ogeysiinta shilalka iyo ogeysiiska dhacdada ayaa la sameeyaa sida ugu dhaqsaha badan ee suurtogalka ah iyadoo la buuxiyo foomka ogeysiiska shilka / dhacdada.
(2) Ogeysiinta waa in lagu sameeyaa boostada elektaroonigga ah ama fakis. Ogeysiinta xaaladaha degdegga ah sidoo kale waxaa lagu sameyn karaa SMS ama taleefan, laakiin markaa ogeysiis qoran oo qoraal ah ayaa la soo diraa oo lagu soo diraa emayl ama fakis.
(3) Shilalka iyo shilalka ka dhaca shabakadda kaabayaasha wadooyinka ee wadooyinka waxaa soo sheegay wadayaasha kaabayaasha tareenka.
(4) Shabakadaha kaabayaasha tareenka ee waddamada shisheeye; shilal ay ku lug gaadiidka tareenka ka shaqeeya ka shaqeeya tareenka tareenka heshay liisanka ee Turkey iyo dhacdooyinka ayaa lagu soo waramayaa by shaqeeya tareenka tareenka.
(5) Shabakadaha kaabayaasha tareenka ee waddamada shisheeye; design, soo saaridda, dayactirka ama ay soo sheegeen hawlwadeenada tareen tareenka oo ku saabsan diiwaangelinta ee shilalka iyo dhacdooyinka ku lug gaadiidka tareenka sameeyey Turkey waa optional.
Go'aansashada in dib loo eego
ARTICLE 7 - (1) tixgalinta soo socota ayaa la tixgalinayaa marka la qiimeynayo haddii shilalka ama shilalka loo arko inay saameyn weyn ku leeyihiin xeerarka amniga iyo maareynta amniga:
a) Darnaanta shilka ama shilka.
b) Nooca shilka.
c) in nidaamka guud ahaan uu qayb ka yahay shilalka taxanaha ama shilalka.
d) Saamaynta nabadgelyada tareenka iyo dalabaadka hawlwadeenada kaabayaasha tareenka, wadayaasha tareenka tareenka, maamulka amniga qaranka ama gobolada kale.
d) In ay horay u jireen warbixino ku saabsan shilalka la midka ah.
(2) In kasta oo aan lagu darin qeexitaanka shilalka halista ah, shilalka ama dhacdooyinka ka dhalan kara shilalka khatarta ah haddii ay dhacaan xaalado kala duwan, oo ay ku jiraan ku-guuldareysiga farsamo ee kaabayaasha tareenka ama qaybaha is-dhexgalka, waa la baari karaa.
Sirta ah ee caddaynta iyo diiwaanada
ARTICLE 8 - (1) Dhammaan macluumaadka iyo dukumiintiyada laga helo baaxadda baaritaanka shilalka iyo qoraallada iyo diiwaangelinta elektiroonigga looma sheegi doono marka laga reebo ujeeddooyinka baaritaanka shilalka oo lama wadaagi karo qof kasta iyo awood kasta marka laga reebo mas'uuliyiinta garsoorka.
Wadashaqeynta dowladaha kale
ARTICLE 9 - (1) Shabakada kaabayaasha wadooyinka tareenka; Mas'uuliyiinta baarista shilalka qaranka ee dowladaha shisheeye ee ay quseyso waxaa lagu martiqaadi karaa inay iska kaashadaan baaritaanka shilalka iyo shilalka ku lug leh gawaarida tareenka ee howlwadeenada wadooyinka tareenka, iyo sidoo kale qaabeynta, soosaarida, dayactirka ama diiwaangelinta gawaarida tareenka ee dowlad shisheeye.
(2) Shabakada kaabayaasha wadooyinka ee shisheeye; qorshee gaadiidka tareenka la shaqeeya tareenka tareenka Turkish, soo saaridda, dayactirka ama diiwaan-bixiyo darsaday in shilka ku lug leh dhacdooyinka baabuur tareenka lagu qabtay shaqada kormeerka Turkey iyo.
Heerka Aqoonta, Nidaamka Shaqada iyo Mabaadi'da, Maamulka iyo Masuuliyada Khabiirada
ARTICLE 10 - (1) Khabiiro; Waa lama huraan in kulliyadaha injineernimada laga soo xusho shaqsiyaadka ka qalin jabiyay nidaamyada tareenka, dhismaha, mashiinka, korontada, korontada, korontada iyo korontada, isgaarsiinta, kumbuyuutarrada iyo waaxda warshadaha.
ARTICLE 11 - (1) Iyada oo ku xidhan nooca cilmibaadhista badbaadada gaadiidka ama imtixaanka, in kabadan hal khubaro ayaa laga yaabaa inay ku shaqeeyaan hal shaqo.
(2) Xaaladdan oo kale, abaabulayaasha khubarada ah ee shaqadooda loo qoondeeyay inay yihiin madaxa kooxda ayaa qaadaya tillaabooyinka lagu hubinayo dhammaystirka shaqada waqtiga loogu talagalay.
Sii wadida iyo wareejinta shaqada
ARTICLE 12 - (1) Khubaradu waxay mas'uul ka yihiin dhammaystirka shaqadii ay bilaabeen iyada oo aan kala go ’lahayn. Khubaradu waxay u dhaqmaan si waafaqsan tilmaamaha ay heli doonaan iyaga oo ogeysiinaya Madaxtooyada haddii ay lagama maarmaan tahay in dib loo dhigo shaqada ama haddii gabagabada shaqadu u baahan tahay cilmi-baaris iyo baaritaan kale.
Habka baarista iyo dib u eegista
ARTICLE 13 - (1) Habka cilmi baarista iyo baaritaanka ee ay sameeyeen khubaro loo xilsaaray baaritaanka amniga ee gaadiidka ayaa ka kooban talaabooyinka soo socda:
a) Helitaanka ogeysiinta shilka / ogeysiiska.
b) Xaqiijinta shilka / dhacdada cutubyada ay quseyso.
c) U wargalinta Madaxtooyada shilka / shilka.
ç) Helitaanka af ama qoraal oggolaansho waajibaadka ah ee ku saabsan shilka iyo shilka uu u go'aansaday Madaxweynaha inuu baaritaan ama baaritaan ku sameeyo.
d) Isla markiiba aado goobta shilku ka dhacay iyo bilaw cilmi baaris iyo baaritaan.
e) Diyaarinta warbixinta hordhaca ah iyadoo la raacayo natiijooyinka horudhaca ah ee shilalka / shilka iyo u bandhigista Madaxweynaha loona go’aamiyo in baaritaanka uu sii socon doono iyo inkale.
f) Ururinta macluumaad dheeri ah iyo dukumiintiyo haddii loo baahdo.
g) Falanqaynta natiijooyinka iyo dukumiintiyada la xiriira shilka / dhacdada.
ğ) Qoritaanka warbixinta qabyada ah ee baaritaanka shilka / shilka.
h) Gudoomiyaha kooxdu wuxuu qoraalka qabyada ah u dirayaa Madaxtooyada si ay u fiiriyaan.
ı) Haddii loo arko in loo baahdo madaxtooyadu, soo gudbinta dhammaan ama qayb ka mid ah warbixinta qabyada ah ra'yiga dhinacyada ay khusayso.
i) Ku darida fikradaha ay soo bandhigeen kooxaha daneynaya muddada gudaheeda, haddii loo arko mid ku habboon, in lagu daro warbixinta qabyada ah.
j) U gudbinta warbixinta qabyada ah guddiga qiimeynta.
k) Haddii guddiga qiimeynta ay go'aansadaan in ay dib u eegaan warbixinta qabyada ah, waxaa lagu soo celin doonaa madaxa kooxda iyadoo ay weheliso caddeyn qoraal ah, oo kooxda dib ayaa loo qiimeyn doonaa kooxda oo dib ayaa loo gali doonaa howsha laga bilaabo (ğ).
l) Haddii ay dhacdo in guddiga qiimayntu go'aansado inuu aqbalo qoraalka qabyada ah, warbixinta waa in qayb ahaan ama gebi ahaanba lagu soo daabacaa websaydhka Madaxtooyada oo lagu daro kaydka Madaxtooyada.
m) Raacno talo soo jeedinta ku xusan warbixinta.
Waajibaadka iyo awoodaha kooxaha iyo khabiirada
ARTICLE 14 - (1) Marka lagu daro waajibaadka iyo mas'uuliyiinta lagu cayimay Xeerka kormeerka Amniga Baarayaasha Gaadiidka Xarunta Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha waxaa lagu daabacay Rasmiga rasmiga ah ee taariikhiisu yahay 11 / 5 / 2019, kooxaha iyo khabiirada loo xilsaaray shilka ama baaritaanka shilka;
a) Waxay fuuli kartaa gawaarida tareemada ee ku lug leh shil ama shil oo baaritaan ku samee gaariga.
b) helitaanka tusaalaha aaladaha duubista gawaarida tareenka, diiwaanada aaladaha isgaarsiinta codka ee laxiriira taraafikada, iyo dhamaan amarada iyo diiwaanada macaamil laxiriirta taraafikada calaamadaha iyo nidaamka kontoroolka taraafikada.
c) Hesho hadalada shaqsiyaadka iyo marqaatiyada ku lugta leh shilka ama shilka oo la duubay cod-hayaha ama qoraal.
ç) U gaar ahaato shilalka ama shilalka; hay'adda amniga qaranka, wadayaasha kaabayaasha tareenka, wadayaasha tareenka tareenka, wakaaladaha dayactirka, unuga dayactirka iyo shirkadaha.
d) Helitaanka natiijada baaritaanka shaqaalaha tareenka iyo shaqaalaha kale ee tareenka ee ku lug lahaa shilka ama shilka.
e) Helitaanka diiwaanka baaritaanka jirka ee dadka ku dhaawacmay shilka.
Waajib ku ah inuu caawiyo khabiirka
ARTICLE 15 - (1) Helitaanka shilka ama goobta ay soo mareen khubaro baarayaasha kuma xaddidi doonaan bixinta cadaynta.
(2) Dadka ay khusayso waxaa ku waajib ah inay fuliyaan codsiyada khabiirada ku lugta leh shilka ama baaritaanka shilka iyadoo la raacayo sharciga khuseeya iyada oo aan dib loo dhigin iyo inay ka jawaabaan su'aalaha iyaga loo soo gudbiyey.
(3) Waxay bixisaa adeegyo gaadiid iyo jawi shaqo oo ku habboon waxayna u xilsaaraa shaqaale xiriiriyayaal inta ay ku gudajiraan howlahooda si loo hubiyo in khubarada ku lug leh baaritaanka shilalka iyo shilalka ay u gutaan waajibaadkooda sidii loogu baahnaa.
(4) Qaybaha ku lug leh shilka ama shilalka waxaa ku waajib ah inay u diraan shaqaalaha ay quseyso Xarunta Madaxtooyada si ay uga helaan macluumaad.
Shaqooyinka ay khubaradu qaban kari waayaan
ARTICLE 16 - (1) Khabiiro ku lug leh shilka ama baaritaanka shilka;
a) Ma sameyn karaan tilmaamo fulin oo aan toos ula xiriirin baaritaanka iyo baaritaanka.
t) Ma sameyn karaan faahfaahin ka bixintooda, ku darista iyo sixitaanka dukumiintiyada, buugaagta iyo diiwaannada.
c) Ma sheegi karaan macluumaadka qarsoodiga ah iyo dukumiintiyada ay soo heleen waajibaadkooda darteed.
) Uma dhaqmi karaan hab khatar gelin kara sharafta iyo kalsoonida ay u baahan yihiin waajibaadkooda iyo ujeeddooyinka ay ku yaalliin.
ARTICLE 17 - (1) Guddoomiyaha kooxda waxaa ku waajib ah inuu u soo bandhigo natiijada natiijooyinka daraasadda Madaxtooyada warbixin.
(2) Haddiiba ay jirto khilaaf ka dhex dhaca xubnaha kooxda ee ku xusan qodobbada lagu sheegay warbixinnooyinka, arrimaha noocan ah waxaa loo gudbin doonaa Madaxtooyada ka dib markii la caddeeyo oo la saxeexo.
(3) Warbixinnada waxaa loo diyaariyey iyadoo lagu saleynayo khibradda laga helay shilalka iyo shilalka, oo ay ku jiraan talooyin ku saabsan hagaajinta amniga gaadiidka iyo ka-hortagga shilalka iyo shilalka la midka ah. Go'aanka maamul, sharci ama qaanuun dambiile ma noqon karo qodobka warbixinta.
(4) Warbixinnada la diyaariyay laguma hoos imaan karo xisaab-celin u hoggaansan.
(5) Shilka tareenka ama baaritaanka shilka iyo warbixinta baaritaanka waxaa ku jira qaybaha soo socda. Qeybo dheeri ah waa lagu dari karaa iyadoo kuxiran nooca shilka ama shilka.
a) Soo Koobid: Waa qaybta macluumaadka aasaasiga ah ee ku saabsan shilka tareenka ama dhacdo lagu muujiyo. Nooca shilka ama shilka, waqtiga, goobta iyo sida ay u dhacday, luminta nafta ama macluumaadka dhaawaca, dhaawaca dhismaha kaabayaasha, gawaarida, xamuulka, dhinacyada saddexaad ama bay'ada.
b) Hannaanka Shilka: Waa qaybta hawshu ku soo martay ka hor, inta lagu gudajiray iyo ka dib shilka si faahfaahsan loogu sharaxay
c) Macluumaadka iyo natiijooyinka ku saabsan shilka: La xiriir shilka ama shilka; hawlgalka nidaamka maaraynta nabadgelyada, abaabulka shaqaalaha, tayada aqooneed ee shaqaalaha, ficilada iyo cadeynta dadka ku lugta leh shilka, xeerarka iyo qawaaniinta la adeegsaday, howlgalka iyo dayactirka diiwaangelinta gawaarida tareenka iyo waxyaabaha kaabayaasha ah, dukumiintiyada nidaamka wadooyinka tareenka, dhacdooyinka hore oo leh astaamo la mid ah iyo macluumaadka kale ee ku saabsan shilka ayaa la sharraxay.
d) Qiimeynta iyo gabagabada: Tani waa qeybta lagu qiimeeyo macluumaadka iyo natiijooyinka ku saabsan shilka. Qeybtani waxay qiimeyneysaa sababaha suurta galka ah.
d) Talo soo jeedinno: Qaybtani waxay ka kooban tahay talo soo jeedinno lagu hagaajinayo amniga gaadiidka.
(6) Waa lama huraan in warbixinnada baaritaanka shilalka la soo dhameystiro oo la daabaco sanadka gudihiisa laga bilaabo taariikhda shilka. 1 waxay soo gudbineysaa warbixin ku meel gaar ah oo ku saabsan warbixinnada shilalka ee aan la daabici karin inta lagu gudajiro sanadka, iyagoo sharraxaya horumarka baaritaannada shilalka ee sannad-guurada shilka.
ARTICLE 18 - (1) Gudiga dib u eegista wuxuu qiimeeyaa dhamaan warbixinada ku saabsan ajandeheeda wuxuuna go’aamiyaa arrimaha la xiriira hagaajinta kaabayaasha gaadiidka iyo howlaha gaadiidka iyo arrimaha badbaadada gaadiidka ee daboolaya dhammaan qaababka gaadiidka.
(2) Haddii la go'aamiyo inay jiraan arrimo ka maqan warbixinnooyinka, kuwaas oo u baahan in dib-u-baaro ama lagu daro baaris, waxaa lagu go’aamin karaa iyada oo la raacayo caddeyn qoran oo ah in cilmi-baarista iyo baaritaanka ay tahay in ay fuliyaan isla kooxda ama kooxda cusub.
(3) Warbixinnada ay aqbaleen guddiga qiimeynta waxaa loo gudbiyaa Wasiirka iyo Guddiga Amniga Madaxweynaha iyo Guddiga Siyaasadda Dibadda.
(4) Warbixinnada waa in lagu soo daabacaa qeyb ahaan ama gebi ahaanba barta internetka ee Madaxtooyada waxaana lagu dari doonaa kaydadka Madaxtooyada.
(5) Talooyinka ku jira warbixinta waxaa raacaya kooxda dib u eegista ee diyaariyey warbixinta. 90 maalmood ka dib markii la daabacay warbixinta, macluumaad qoraal ah ayaa laga codsanayaa xarumaha iyo ururada lagu taliyay. Macluumaadka iyo cusboonaysiinta heerka fulinta ee talo bixin kasta waa la diiwaangeliyaa.
Warbixinnada shilalka iyo shilalka ee hawl wadeennada
ARTICLE 19 - (1) Wadayaasha kaabayaasha tareenka iyo wadayaasha tareenka tareenka waxay u diraan koobi shilka shilalka iyo warbixinada shilalka shan maalmood gudahood marka warbixinta la soo gabagabeeyo.
ARTICLE 20 - (1) Xaaladaha uusan ku jirin qayb ka mid ah Xeerarkan ee ku saabsan baaritaanka shilalka tareenka iyo shilalka, qawaaniinta Xeerka Xarunta Baadhitaanka Amniga Gaadiidka ee Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha iyo sharciga la xiriira ayaa lagu dabaqi doonaa.
Xeerka dib loo dhigay
ARTICLE 21 - (1) Xeerka Baadhista iyo Baadhista Shilalka Waddooyinka Tareenka iyo Dhacdooyinka lagu daabacay Rasmiga Rasmiga ah ee taariikhiisu yahay 16 / 7 / 2015 waa la laalay.
ARTICLE 22 - (1) Xeerarkan wuxuu dhaqan gelayaa taariikhda daabacaddiisa.
ARTICLE 23 - (1) Qodobbada Xeerkan waxaa fulin doona Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha.
ANNEX- SI AAD U HESHO FUUQADA Riix halkan
AKP iyo MHP waxay diidaan soo jeedinta inay baaraan shilalka tareenka
Baahida loo qabo Baaritaanka Shilalka Waddada Tareenka AKP…
yourssenkrupp Rottweil Research Research Research…
Nidaamyada Tareenka Qaranka ee Jaamacadda Anadolu…
CHP, 3. Cilmi baarista garoonka diyaaradaha…
Qaanuunka Gudiga Isuduwida Wadada Tareenka…
Gaadiidka TCDD Xeer-ilaaliyaha edbinta
Xeerka Shaqaalaha ee TCDD
Shabakada kaabayaasha qaranka